ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်း ရှိ ရောင်းရန် Moe Kaung Road (မိုးကောင်းလမ်းမ), တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - တိုက်ခန်း - Moe Kaung Road (မိုးကောင်းလမ်းမ)
*Location – Moe Kaung Road, Yankin Township.
*Area — 1350 sqft
*Rooms formation — 2-Normal Bedrooms, Living room and Kitchen.
*Other Features — Floor Type — RC, 1-Bathroom and ready to live located at Yankin Township.
Property ID: S-1189276
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Moe Kaung Road (မိုးကောင်းလမ်းမ)
Moe Kaung Road (မိုးကောင်းလမ်းမ)
ရန်ကင်း၊ သာယာရွှေပြည်အိမ်ရာ ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
အဆင်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ရန်ကင်းအိမ်ရာ အမြန်ရောင်းမည်
Code-7602 ရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-7430 ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်7Floor တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
** ရန်ကင်း အောင်ဇေယျလမ်းမပေါ်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ရန်သင့်တော်သော မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ **
** ရန်ကင်းမိုးကောင်းလမ်းမပေါ်တွင် အခန်းကျယ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။**
ရန်ကင်း၊မိုးကောင်းလမ်းရှိရောင်းရန်ရှိသောအလွှာမြင့်တိုက်ခန်း(Malihku Real Estate)
ရန်ကင်းမြို့နယ် Super One Marketအနီး မိုးကောင်းလမ်းမပေါ်ရှိ ၈လွှာ မီနီကွန်ဒို ရောင်းမည် ။
MoeKaung Housings (မိုးကောင်းအိမ်ရာ)
မိုးကောင်းဘုရားအနီး မိုးကောင်းလမ်းမပေါ်ရှိ မီနီကွန်ဒို ရောင်းရန်ရှိသည်။
ရန်ကင်းမြို့နယ် မိုးကောင်းလမ်းမပေါ်ရှိ မီနီကွန်ဒိုမြေညီထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
Code-6768 ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် ပြင်ဆင်ပြီး တတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-6738 ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် ပြင်ဆင်ပြီး တတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
** ရန်ကင်းမြို့နယ် ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာတွင် ပြင်ဆင်ပြီးသား အခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ **
** ရန်ကင်းလမ်းသွယ်တွင် မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ **
Aung Zayya Street (အောင်ဇေယျလမ်း)
Shweproperty ID: S-1189276